श्रीमानले ३५ लाख पैसा लिएर श्रीमति फरार भन्दै मिडियामा आएपछि श्रीमति घर फर्किन, यथार्थ कुरा अर्कै रहेछ (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्रीमानले ३५ लाख पैसा लिएर श्रीमति फरार भन्दै मिडियामा आएपछि श्रीमति घर फर्किन, यथार्थ कुरा अर्कै रहेछ (भिडियो सहित)
श्रीमानले ३५ लाख पैसा लिएर श्रीमति फरार भन्दै मिडियामा आएपछि श्रीमति घर फर्किन, यथार्थ कुरा अर्कै रहेछ (भिडियो सहित)
admin March 1, 2020 भिडियो, समाज	0
जिवनभर माया गर्छु भनेर विवाह गरेर ल्याएका श्रीमानले घोँडा चढेर घाँटी अटचेर जिवन लिन खोजेपछि श्रीमती अहिले मिडियामा आएकी छन् । उनलाई श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको अनैतिक सम्बन्ध पनि रहेको र पैसा पनि लिएर गएको आरोप लगाएपछि उनको श्रीमतीले आफ्नो सफाई दिएकी छन् । उनले आफ्नो फुपुको छोराले घर बनाउँदा पनि सहयोग गरेको र पैसा पनि उनीसंग लिएको बताइन् ।
आफ्नो घरमा काम गर्ने ब्यक्तिलाई कहिले काँही भाई आउ चिया खाउ त भन्ने पर्यो । उनले भनिन्, आफ्नै घरमा काम गरेको छ हामी चिया खाएर बसेका छौं आउ भाई चिया खान त जसले पनि भन्छ । आफुले खाँदा भाईलाई त्यतीकै रहेर बस भन्न त मिलेन ? उनको भनाई छ ।
महिलाले घर बनाउँदा लिएको ऋणका बारेमा आफ्ना श्रीमानले अनावश्यक आरोप लगाएको बताइन् । उनले आफ्ना श्रीमानलाई सबै आरोपको खण्डन गर्दै लागेको हिसाव बुझाएकी छन् । घरजग्गा ऋणमा राखेर उनले लिएको पैसाको बारेमा जवाफ दिएकी थिइन् ।
श्रीमान विदेशमा रहेको र आउँदा श्रीमती ३० लाख रुपैया लिएर हिडेको भनेर आरोप लगाएपछि श्रीमती आफ्नो सबै प्रमाण लिएर मिडियामा आएकी हुन् । काठमाडौंको मुलपानीको यो घटनाले के देखाएको छ भने विदेशमा भएका श्रीमानले मेरो श्रीमतीले धोका दिएर पैसा लिएर गयो भनेर मिडियामा आएका सबै कुरा सहि नहुने प्रमाणीत गरेको छ ।
घर बनाउँदा घरमा बसेर ब्यवहार मिलाउँदा ऋण लाग्ने र श्रीमानले विश्वास नगर्दा समस्या आउने गरेको देखिएको छ । काठमाडौंको मुलपानीको यि जोडी अहिले प्रहरकिो अगाडी सबै समस्याका बारेमा खुलस्त बताएर अहिले उनीहरु मिलेका छन् ।
श्रीमानका मामाले मलाई ऋण चाहियो मलाई तिम्रो जग्गा राखेर पैसा देउ भनेर फकाए, उनले श्रीमानका मामालाई पैसा दिइन् त्यही विषयमा श्रीमान श्रीमतीबीच झगडा भएको थियो । तर त्यो श्रीमतीको नियत नराम्रो थिएन । श्रीमानको मामाले भनेको बेलामा पैसा नदिएको कारण उनीहरुवीच समस्या भएको थियो । श्रीमानले मेरो ३५ लाख पैसा लिएर गयो भनेर श्रीमानले प्रहरीमा उजुरी समेत दिएका थिए ।
प्रहरीले फोन गरेपछि माइतमा रहेकी श्रीमती म प्रहरीकोमा जान्न आउ म तिमीलाई नै सबै हिसाव देखाउँछु भनेर श्रीमानलाई लिएर उनी प्रहरी सहित प्रहरी कार्यालय गएकी थिइन् । उनले म पैसा लिएर कतै गएको होइन , पैसाका कारणले समस्या पनि भएको होइन, श्रीमानले कुटपिट गरे पछि म माइत गएर मात्र बसेको हो । श्रीमतीले आफ्ना कुरा राखिन् ।
हेमा माथि लाठी चार्ज गर्ने प्रहरीकै बिरूद्ध हेमालाई न्याय दिन पुगे पुर्व डिएसपी (भिडियो सहित)
राष्ट्रिय सभा गृहको एक कार्यक्रममा प्रचण्ड माथि जु’त्ता प्र’हार (भिडियो सहित)
श्रीमतीलाई क्यान्सर भएपछि हुम्लाका यि दम्पत्ति परे ठूलो फसादमा, आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा भयो बेहाल (भिडियो)
गुल्मीमा करेन्ट लागेर एक जना महिलाको ज्यान गयाे
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोजगारीको सुवर्ण अवसर, ४३८ जनाका आवस्यकता ! (सूचना सहित)